Ezokhenketho ziya kuchuma: enkosi ngokulibala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwakha kwakhona » Ezokhenketho ziya kuchuma: enkosi ngokulibala
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ulibale uKhenketho 1
Ngaba isakhono sokulibala sisitshixo sokubuyisa ukhenketho? Akukho mfihlo yokuba iingxaki ezinokuchaphazela kakubi umbono wabahambi wokuba ngaba indawo ekuyiwa kuyo ikulungele na ukutyelelwa. Ke abaphathi benza njani ukuba ngabakhenkethi bazilibale iinkumbulo ezibuhlungu ze-2020? Okanye ngaba abahambi banomdla wokufota ezo nkumbulo kude kwaye baqale ezintsha?
Iindaba ezimnandi kumzi-mveliso wokhenketho kukuba enkosi kwiinyanga zokuzahlulwa, izakhono zethu zememori ziye zonakala, kwaye kusenokwenzeka ukuba ezinye (ukuba ayizizo zonke) zezinto ezimbi ezenzekileyo (ngokukodwa nangokuhlangeneyo) ziyakulityalwa okanye zincitshiswe ngamandla, kwaye ukhenketho luyakuchuma kwakhona.
Umxholo wokulibala yinto ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa abaphathi behotele, abakhenkethi kunye nabakhenkethi bexoxa ngokuziphatha kwabathengi emva kokuba beceba isicwangciso esiliqili sentengiso. Ngokugxila ekulibalekeni kunye nokulahleka kwememori kunye nokuhamba kude nembono yomngcipheko, abaphathi beshishini banokwazi ukuphuhlisa ukuqonda okusebenzayo kweenkqubo zokuqonda kunye neemvakalelo ezichaphazela indlela yokuziphatha kwabakhenkethi.
Ayisixhumi elikhulu ukuvuma ukuba imbono yomngcipheko kunye nesimo sengqondo kwiindawo ekufikelelwa kuzo zichaphazeleka ziingxaki. Amaxesha kaxakeka kunye / okanye iintlekele kungakhokelela kutshintsho kwizicwangciso zokuhamba ezinokukhuthaza abahambi ukuba baphephe indawo / umtsalane, bahlehlise uhambo okanye basuse ngokupheleleyo umbono wokuhamba kwiholide okanye kwi-ajenda yeshishini.
Ngethamsanqa kolu shishino, ekuhambeni kwexesha, iziphumo ezibi ziyalityalwa, kwaye indawo ekuyiwa kuyo iphila kwakhona njengeemfuno zabantu, iminqweno kunye neenjongo zokuhamba zithatha ixabiso elingaphezulu komngcipheko kwaye baphinde babeke ixesha nemali kwindawo ekuyiwa kuyo kunye / okanye umtsalane. . Utshintsho kumbono luya kwenzeka ngokukhawuleza ukuba abaphathi bezokhenketho bathathe (okanye babonakala ngathi bathabathe) amanyathelo okuphucula iingxaki ezibonakalayo.
Unxibelelwano phakathi kwememori kunye nokulibala luvela kwiintsomi zamaGrike. Inkumbulo (Mnemosyne) kunye nokulibala (Lethe) zimelwe njengemilambo emibini engqameneyo kumhlaba weHadesi kunye nokwenziwa kwesithixokazi seMemori kunye ne-Oblivion.
Imiphefumlo yabafi yayifuneka ukuba isele emanzini aseLethe ukuba ibulibale ubomi bayo bokuqala ngaphambi kokuba iphinde izalwe, ngelixa abakhwetha bekhuthazwa ukuba basele kumlingane wabo, uMnemosyne, bayeke ukona komphefumlo njengoko bekhumbula yonke into kwaye bafeze ukwazi konke. . Imemori kunye nokulibala kubonisa ezimbini ezihambelanayo kodwa ezingenakulinganiswa.
Njengokuba ndifunda ukukhutshwa kwamaphepha-ndaba kwimibutho yabarhwebi ekuyiwa kuyo, amaqela ehotele, iinqwelomoya kunye nenqwaba yabacebisi kwezobudlelwane boluntu, kukho inkolelo eqinileyo yokuba u-2021 uza kubona ukuvuseleleka kwezokhenketho, ngaphakathi nangaphandle. Iifemu zokubonisana nabaphathi kunye nezinye iingcali zophando zilumke ngakumbi, zibonisa ukuba umzi mveliso kuya kufuneka ulinde kwaye ubukele kude kube yikota yesi-2 okanye yesithathu ka-3 ukubona amasango evulekile kwaye abakhenkethi bephindaphinda iihotele, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye nezikwere zeedolophu.
Nokuba abaphathi bezokhenketho bayayiqonda okanye akunjalo, into abathembele kuyo, njengoko behlanganisa imbuyiselo ecetywayo kutyalo-mali lwabo (i-ROI), "lithemba" lokuba abenzi beholide bayakulibala izoyikiso zika-2020 kwaye bakhumbule (ngoncumo kunye glee), amaxesha okonwaba abawafumeneyo ngo-2019 nangaphambili. Ngelishwa, ngale nkolelo iphambili ezingqondweni zabo, abaphathi benza okuncinci kakhulu ukwenza utshintsho kuluhlu lwabo lwe-2019 kwaye iihotele ezisandula ukuvulwa azidibanisi izicwangciso zobuchwephesha, itekhnoloji, amalaphu alwa ne-microbial kunye nezixhobo kwimisebenzi yabo enokuthi ijongane kwaye ukuphucula impilo kunye nokhuseleko loyiko lwabahambi be-wannabe.
Umbhali uLaura Spinney (uMkhweli wePale: Umkhuhlane waseSpain wango-1918 and How It Changed the World), yafunyanwa, “Ukuba ujonga emva kwimbali, utyekelo lwethu njengabantu ibikukulibala ubhubhane kwakamsinya nje ukuba zidlulile. Sijikeleza ngokungakhathali kunye noloyiko. Soyikeka xa kuqhambuka lo bhubhani, silibale ke ngaloo nto, sibuyele kukuzithemba, kwaye asithathi manyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba siza kulungela ngcono kwixesha elizayo. ”
Isifundo sikaDisemba 2020, Ingxelo yeCoronavirus Travel Sentiment Index, ifumanise ukuba indlela abathengi abaziva ngayo malunga nokuhamba ichaphazeleke kanobom Covid-19 kwaye indlela yokujonga uhambo yahlulwe phakathi kokulungela kunye nokuthandabuza ngesiqingatha sabaseMelika abakakulungelanga ukushiya ubutofotofo besingqengqelo sabo kunye nothuli kwiipaspoti zabo. Uphando olwenziwe ngeveki ka-Disemba 14, 2020 luchaze ukuba ama-55 eepesenti abantu baseMelika ekuhlolisiswe nabo baneemvakalelo zokuziva benetyala ngohambo “ngoku,” ngeepesenti ezingama-50 bephulukana nawo wonke umdla wokuhamba “okwangoku.” Phantse isithandathu kwishumi (iipesenti ezingama-10) bakholelwa ukuba uhambo kufuneka lilinganiselwe, ngokukodwa, kwiimfuno ezibalulekileyo ngama-58 eepesenti amisela ukuba abahambi akufuneki beze kwiindawo abahlala kuzo, “ngoku.” Inkuthazo yokuhamba ishenxiselwa kwi-Q50 ka-2 nge-2021/2 yabantu baseMelika abafumanisa ukuba ubhubhane wangoku ubenza bangabinakho ukuhamba kwezi nyanga zintathu zizayo. Ukhetho lokugonya luneziphumo ezilungileyo kwaye ama-3 eepesenti abantu baseMelika baziva ngathi iyeza lokugonya libenza babe nethemba ngakumbi malunga nokuhamba okukhuselekileyo (ustravel.org).
Uphononongo olwenziwe nguMbutho woHambo lweShishini lweHlabathi (i-GBTA) (ngeyoMnga yowama-2020), lufumanise ukuba abathathu kwabane abaphendulayo balindele ukuba abasebenzi bazimase iintlanganiso / iziganeko ezenzeka buqu kwi-Q2 okanye i-Q3, 2021. Amalungu amathathu kwabahlanu e-GBTA amisele ukuba isitofu sokugonya sasiyinto ebalulekileyo kwisigqibo senkampani yabo sokuphinda baqale ukhenketho lweshishini; Nangona kunjalo, iipesenti ezingama-54 zeenkampani ezingamalungu e-GBTA zihlala zingaqinisekanga malunga nokuma kwazo malunga nokufumaneka kwesitofu sokugonya kunye nethuba lokuvuselela uhambo lweshishini. Xa ipesenti "ebalulekileyo" yabemi igonyiwe, enye kwezi nkampani zintlanu ithe iyabavumela abasebenzi bayo ukuba baye emsebenzini.
Amashumi amathathu anesithandathu eepesenti zabaphenduli be-GBTA eMntla Melika bathi inkampani yabo iqale ukucwangcisa iintlanganiso / iminyhadala engama-2021 kwaye ngaphezulu kwesiqingatha baceba iintlanganiso / ubungakanani beentlanganiso eziphakathi ukuya kuthi ga kuma-500. Njengokuba ukubakho kweziganeko ezenziwa ngumntu buyekeze ukuya kwiintlanganiso zebhastidi kulindeleke ukuba kwehle (ustravel.org).
Uphando lubonisa ukuba kukho imfuneko yokuphumla yokuhamba. Ukulungiselela uqoqosho lwasemva kwe-COVID-19 ezinye iinkokheli zikazwelonke kunye noorhulumente basekhaya baphinde bavavanya iimveliso zabo zokhenketho kwaye bahamba ukusuka kukhenketho oluncinci, ukugcina imali eninzi kuqoqosho lwasekhaya, kunye nokunyanzelisa imigaqo yengingqi eya kukhusela i-eco-systems zabo kunye nokunyusa iinkqubo ezinxulumene nezempilo. Kuya kubakho ukhuphiswano olonyukayo lokuncipha kwedola yabakhenkethi ngomdyarho oya ezantsi. Onke amacandelo oshishino aya kubonelela ngezaphulelo ezinzulu ukuzalisa amagumbi eehotele kunye nezihlalo zeenqwelo moya.
Abahambi baya kukhetha indawo abaya kuyo, iihotele kunye nezinto ezinomtsalane ezikhuthaza ulawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo efanelekileyo yokhathalelo lwempilo. Kusenokwenzeka ukuba umboleki uza kuhamba kancinci kodwa ahlale ixesha elide. Abahambi banokubona ubhubhane njengoluqikelelo lwento eza kuvela kwiingxaki zemozulu ngenxa yokungabinamdla kwabucala nakuluntu.
Kubahambi abaya kwizikhululo zeenqwelo moya nakwiinqwelomoya - baya kufumanisa ukuba iteknoloji ithathe indawo yoqhakamshelwano lobuqu, kunye nococeko oluphuculweyo lokujongana neempawu zabo zococeko; kuyakubakho ukuvavanywa kobushushu kunye nokuhamba kude ekuhlaleni kwaye ezinye iinqwelomoya kunye nezikhululo zeenqwelo moya ziya kuqhubeka zifuna abakhweli banxibe iimaski.
Ukhenketho lwasekhaya luza kubona ukwanda kokhenketho lokuqala njengoko abantu beya kuba nakho ukuhamba ngeemoto zabo, iiveni okanye iiRVs ezinikezela umlinganiselo wokhuseleko nokhuselo. Ukhenketho lwamazwe aphesheya luza kuncipha luye phezulu-luvuswe ngoobhaka kunye nabahambi bebhajethi kunye nabanye abafuna ukunxibelelana nabahlobo kunye nosapho (foreignpolicy.com; wttc.org).
Okwangoku - AKUKHO HAYI… Apho! IGosa eliyiNtloko le-World Travel & Tourism Council, uGloria Guevara, ucinga ukuba ukhenketho luza kuphinda luqale ngo-2022, ukuba onke amaqabane ezokhenketho anokulungelelanisa izenzo zawo. Umbutho we-International Air Transport Association (i-IATA) uqikelela ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngo-2024 kwaye u-Arnie Sorenson, iGosa eliyiNtloko laseMarriott unethemba lokuphinda ubuye kwezokhenketho kodwa akaqinisekanga ukuba liza kubuyela nini kwinqanaba le-2019.
Ukuba sijonga ishishini lezokhenketho ngokwembali - kuyacaca ukuba kuyakubakho isaphulelo. Ngo-2011 iJapan yaba nentlekele yenyukliya (isityalo senyukliya iFukushima Dai-ichi). Kuthathe iminyaka ukuba abahambi baphinde bakhe ukuthembana kodwa xa besenza njalo, abafikayo phesheya baphuma ukusuka kwi-13.4 yezigidi (2014) ukuya kwi-31.2 yezigidi (2018) okwenza iJapan ibe yeyona ndawo ikhula ngokukhawuleza kwihlabathi.
I-SARS yayingamava amabi, njenge-Ebola - eqhubeka nokuchuma e-Afrika; Nangona kunjalo, ukubekelwa indawo kwi-safari akukhange kuchaphazele esi sifo. Ngokwenyani, abantu bayalibala- ukuyenza ibe ziindaba ezimnandi zokhenketho.